Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan rarida xilliga fasaxa, carqaladaynta silsiladaha saadka iyo saamaynta 2022
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku saabsan rarida xilliga fasaxa, carqaladaynta silsiladaha saadka iyo saamaynta 2022
In kasta oo mawjadda labaad ee Covid-19 ay u muuqato inay dib u dhacayso, haddana masiibada adduunka ee baahsan waxay ku dhowdahay gees kasta oo nolol maalmeedka ah. Sahayda badeecada macmiilku, tusaale ahaan, si gaar ah uma fadhiyin. Iyada oo armaajooyin madhan ay ku jiraan tafaariiqda leben-iyo-hoobiye iyo dib-u-dhaca maraakiibta ee tafaariiqleyaasha internetka, macaamiisha waxay la kulmaan hubin la aan ku saabsan helitaanka alaabta ay rabaan-gaar ahaan u gudubka xilliga dukaamaysiga fasaxa. Q&A oo kooban, Chris Craighead, John H. “Red” Dove Professor ee Maareynta Silsiladda Sahayda ee Jaamacadda Tennessee, Knoxville ee Kulliyadda Ganacsiga iyo khabiir ku saabsan carqaladeynta silsiladda sahayda, ayaa dhowaan wax ka qabtay dukaamaysiga xilliga fasaxa iyo welwelka maraakiibta iyo sahayda dhibaatooyinka silsiladda guud ahaan.
In kasta oo mawjadda labaad ee Covid-19 ay u muuqato inay dib u dhacayso, haddana masiibada adduunka ayaa ku haysa dhinac kasta oo nolol maalmeedka ka mid ah. Sahayda badeecada macmiilku, tusaale ahaan, si gaar ah uma fadhiyin. Iyada oo armaajooyin madhan ay ku jiraan tafaariiqda leben-iyo-hoobiye iyo dib-u-dhaca maraakiibta ee tafaariiqleyaasha internetka, macaamiisha waxay la kulmaan hubin la aan ku saabsan helitaanka alaabta ay rabaan-gaar ahaan u gudubka xilliga dukaamaysiga fasaxa. Q&A oo kooban, Chris Craighead.
S: Adeegga Boostada Mareykanka wuxuu soo jeedinayaa in la soo diro boostada dhulka tafaariiqda marka la gaaro 15-ka Diseembar, boostada fasalka koowaad illaa Diseembar 17, boostada mudnaanta leh ilaa 18-ka Diseembar iyo mudnaanta boostada oo la muujiyo 23-ka Diseembar. waxaa suurtogal ah in la soo diro hadiyado ka hor Halloween si loo hubiyo bixinta xilliga fasaxa. Haddii warbixinnadaani sax yihiin, kani ma yahay arrin silsilad sahay ah?
A: In kasta oo aanan aqoon u lahayn cilmi -baarista dhabta ah ee ka dambaysa warbixinnadaas, waxaan aaminsanahay in macaamiisha ay tahay inay sannadkan u wajahaan si ka duwan xilliyadii fasaxa caadiga ahaa ee hore. Tani waa arrin aad u badan oo ku saabsan silsiladda sahayda. Tani waa arrinta silsiladda sahayda, sababta oo ah dhibaatada hoose ayaa ah in awoodda lagu bixin karo baakadaha/badeecadaha ay xaddidday dhowr arrimood, sida yaraanta shaqada iyo hantida gaadiidka (tusaale, baabuurta xamuulka, isjiidka). Awooddan xaddidan, ayaa iyana, sababi karta dhaqdhaqaaq xirmo oo gaabis ah iyo dib -u -dhacyo iman kara.
S: Maxaa jira, haddii ay wax jiraan, macaamiishu waxay samayn karaan si loo hubiyo imaanshaha waqtigii loogu talagalay ee iibsiyada xilligan fasaxa?
A: Waxaa jira ugu yaraan saddex waxyaalood oo ay macaamiishu samayn karaan si ay uga caawiyaan sidii looga gudbi lahaa caqabadaha iman kara.
Marka hore, bilow goor hore. Sida kor looga hadlay, bilowgii hore ee wax iibsiga/dhoofintu waxay noqon kartaa mid faa'iido leh. Haddii macaamiisha ku filan ay goor hore bilaabaan, tani waxay kaa caawin doontaa inaad iska ilaaliso koror weyn oo ku yimaada shixnadaha dhammaadka Nofembar iyo horraanta Diseembar oo ka badin kara awoodda gaarsiinta xaddidan.
Marka labaad, baabi'i shixnadaha dheeraadka ah. Tusaale ahaan, dukaameeystayaasha onlaynka ah waxay yeelan karaan shirkado si toos ah ugu dira maraakiibta qoyska iyo saaxiibbada halkii ay naftooda u dhoofin lahaayeen kadibna u gudbin lahaayeen qoyska iyo saaxiibbada.
Ugu dambayn, si xikmad leh u dooro xulashooyinka dhoofinta iyo shirkadaha internetka. Dhammaan xulashooyinka maraakiibta looma siman yahay isku halaynta iyo xawaaraha. Sidoo kale, dhammaan shirkaduhu si isku mid ah uguma habboona dhoofinta degdegga ah ee lagu kalsoonaan karo ee iibsiyada onlaynka ah.
S: Ma jiraan silsilado sahay oo kale oo ay macaamiishu ka ogyihiin xilliga fasaxa?
A: Shirkado badan ayaa wajahaya caqabado la xiriira ka -hakinta iyo ka -gaabinta buuxinta caadiga ah. Guntii iyo gunaanadkii waxaan leenahay, xaalado badan, dalab ka sarreeya sahayda. Macaamiishu waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan ugu yaraan laba habayn oo lagu sameeyo xilliga fasaxa.
Marka hore, ha argagixin, laakiin noqo mid firfircoon. Iswaafajinta u dhaxaysa sahayda iyo baahida ayaa sababi karta in aan la heli karin taas oo noqon karta mid aad u dhib badan marka aan hormarno dhammaadka 2021.
Marka labaad, fiiri miisaaniyadda. Isku -dheelitir la'aanta dalabka/dalabka waxay sababi kartaa (sida aan marqaati u nahay) sicirro sare. Waxaa intaa dheer, iyada oo alaabtu xaddidan tahay, tafaariiqlayaashu waxaa laga yaabaa inaanay raalli ka ahayn inay bixiyaan qiimo dhimis qoto dheer. Dhammaanteen waan jecelnahay gorgortan laakiin sugitaankooda ayaa laga yaabaa inay khatar badan tahay sannadkan.
S: In kasta oo macaamiisha laga yaabo inay ku eedeeyaan khaanadaha qaawan ee dukaanka oo kaliya carqaladeynta silsiladda sahayda, miyey jiraan arrimo ay ka mid yihiin yaraanta shaqada iyo yaraanta alaabta ceyriin halkan?
A: Haa, laakiin asal ahaan kuwani dhammaantood waxaa loo arki karaa inay yihiin carqalado silsiladda sahayda ama ugu yaraan dhacdooyin kiciya. Tusaale ahaan, haddii shirkad wax -soo -saarku ay qorshaynayso inay soo saarto 10,000 cutub oo wax -soo -saar ah muddo cayiman, laakiin yaraanta shaqaaluhu ay keento kaliya awood ku filan oo ay ku soo saarto 5,000, qorshaha waa la carqaladeeyay. 5,000 oo maqan ayaa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ku keento khaanado qaawan. Taasina waa hal tusaale oo kaliya oo ah arrimo badan oo gacan ka geysan kara yaraanta silsiladaha sahayda.
S: Ugu dambayntii, waxaan si joogto ah u maqalnaa khubaro ka hadlaysa “caadi cusub” ee silsiladaha sahayda. Si kastaba ha ahaatee, markaan ku dhownahay dhammaadka sannadka labaad ee masiibada, niyad -jabka macmiilku wuxuu u muuqdaa mid sii kordhaya in sahayda badeecadu aanay diyaar u ahayn. Ma yaraanta wax soo saarka ee soo noqnoqda ayaa cusub?
A: May. Xaalado badan, arrimuhu waxay ku noqon doonaan xaaladihii hore ee Covid. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaalo ka reeban. Waxaan u maleynayaa inaan sii wadi doonno inaan aragno xoogaa yaraanta ah maadaama silsiladaha sahaydu ay ku soo noqonayaan awood buuxda. Sidoo kale, waxaa jira arrimo awoodeed oo waqti dheer qaadan doona in wax laga qabto, sida yaraanta wadayaasha baabuurta xamuulka.
Qoraal ka sii iftiimaya, waxaan u malaynayaa inay jiri doonto heer hal-abuurnimo ay sababtay Covid oo kaydi doonta qaar ka mid ah silsiladaha sahayda heer sare oo heer sare ah, taas oo iyana qiimo badan u keenaysa macaamilka. Ilaa heerka ay tani dhacdo, macaamiisha ayaa laga yaabaa inay la kulmaan caadi "ka fiican".